Mogadishu Journal » Xant ayaa leh: PSG ayaa wali bartilmaameedsanaysa Cristiano Ronaldo
Knife attack in Nice sends France into further shock:
Turkey condemns Charlie Hebdo over Erdogan cartoon:
Muslim world’s fallout with France deepens:
Nigeria seeks to halt looting amid fury over ‘food warehouses’
Xant ayaa leh: PSG ayaa wali bartilmaameedsanaysa Cristiano Ronaldo
Paris Saint-Germain ayaa wali rajo ka leh saxiixa xiddiga Juventus Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa inuu weli bartilmaameed u yahay Paris Saint-Germain.
Ronaldo, oo 35 jir ah, ayaa ku jira xilli ciyaareedkiisii ​​seddexaad ee Juventus ka dib markii uu shanta jeer ku guuleystay Ballon d'Or uu ku riyaaqay kooxo waa weyn Real Madrid iyo Manchester United.
Laakiin ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Portugal ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Turin horaan, hadalkaasina waa uu sii socdaa.
Sheekada ugu wayn
PSG ayaa u dhaqaaqi karta markale Ronaldo sanadka soo socda, sida laga soo xigtay CalcioMercato.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa sheegeysa in Ronaldo ay ka go'an tahay inuu arko qandaraaskiisa Juventus illaa 2022.
Ronaldo ayaa dhaliyay seddex gool labo kulan uu u saftay Juve xilli ciyaareedkan.
- Barcelona iyo Juventus miyay isku dari karaan heshiisyo dheeri ah sanadka dambe? CalcioMercato ayaa sheegeysa in labada koox ee reer Yurub laga yaabo inay bilaabaan wadahadalo ku saabsan heshiis is dhaafsi ah oo ay ku lug leeyihiin Ousmane Dembele iyo Federico Bernardeschi. Horaantii sanadkaan, Miralem Pjanic ayaa ka tagay Juve kuna biiray Barcelona, ​​halka Arthur uu ku biiray kooxda heysata horyaalka Serie A.
- Mesut Ozil wuxuu doonayaa inuu sii joogo Arsenal. TyC Sports ayaa sheegaysa in kooxda reer Saudi Arabia ee Al-Nassr ay made 5million ku dalbatay Ozil isla markaana ay Arsenal diyaar u ahayd inay aqbasho, laakiin kubadsameeyaha ayaa doonayay inuu sii joogo kooxda ka dhisan Premier League.
- Iyadoo Alisson uu dhaawacmay Adrian isna dab la qabadsiiyay, Liverpool ayaa lala xiriirinayay inay u dhaqaaqeyso goolhaye ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga gudaha England jimcaha. Si kastaba ha ahaatee, Mirror ayaa ku warramaysa in kooxda heysata Premier League aysan la soo saxiixan doonin goolhaye cusub inkastoo ay xiriir la leeyihiin Stoke City goolhaye Jack Butland.
- Ka dib markii uu sii joogay Sevilla iyadoo lala xiriirinayo Manchester City, Jules Kounde ayaa laga yaabaa inuu qandaraas cusub u saxiixo. Muchodeporte ayaa warinaya in kooxda ka ciyaarta LaLiga ay dooneyso inay heshiiska u cusbooneysiiso daafaca.
- In kasta oo lala xiriirinayey inuu u dhaqaaqayo, Nikola Milenkovic wuxuu ku dhammaaday inuu sii joogo Fiorentina. Si kastaba ha noqotee, CalcioMercato ayaa sheegaysa in Milan ay ku laaban karto dalab daafaca ah bisha Janaayo ka dib markii ay go’aansatay inay bixiso 40 milyan ginni oo Fiorentina ay ku dooneysay 23 jirkaan reer Serbia xilli ciyaareedkan.
- Juventus waxay u maleyneysaa inay ka heli karto wax ka badan € 50m daafaca Merih Demiral, sida laga soo xigtay CalcioMercato. Demiral ayaa lala xiriirinayay kooxaha Inter iyo Tottenham.
China to test entire city of Qingdao after COVID-19 cases emerge